Vaovao - Kilasy fitiavana: inona ny atody mitsambikina?
Ny atody mitsambikimbikina dia vokatra fanaovana firaisana ara-nofo vehivavy, mahafatifaty kely ampiasaina amin'ny filalaovana vady sy vady. Ny atody mitsambikina dia misy fiasa hovitrovitra, mba hanohizan'ny vehivavy ny orgasme. Izy io dia misy fiatraikany tsara amin'ny fitsaboana ny tsy firaikana ara-nofo amin'ny vehivavy, ny tsy fisian'ny orgasme ary ny aretina hafa.
Fa maninona no antsoina hoe atody mitsambikina? Angamba satria miendrika atody. ny atody mitsambikina dia mizara ho: atody mitsambikina tariby sy atody mitsambikina tsy misy tariby. Amin'ny ankapobeny, ny atody mitsambikimbikina dia mampiasa fitaovana fitsaboana polymer tsy misy poizina avo lenta. alohan'ny fampiasana sy aorinan'ny fampiasana dia tokony hihaino tsara ny fanadiovana sy ny fahadiovana ianao. Ny faritra boribory anatiny amin'ny atody mitsambikina tsy tantera-drano dia tsy tokony hikasika rano, fa ny ranom-pitiavana vehivavy amin'ny fitsidihan'ny atody dia tsy misy vokany, azo ampiasaina soa aman-tsara izy.
Ny atody mitsambikina, fantatra koa amin'ny hoe atody manaitra, izay misy motera manaitra. Noho ny habeny sy ny fientanam-po mahery vaika, ny atody mitsambikimbikina dia be mpitia eo amin'ny tovovavy, nefa koa an'ny fotsy hoditra tokana, vehivavy sisa tavela. Satria mitsambikina atody, na dia kely aza, fa afaka mitondra fahatsapana fahafinaretana mahery vaika amin'ny vatana sy saina. Izany no majika amin'ny mitsambikina atody, afaka mandrisika amin'ny fomba mahomby ireo faritra marefo amin'ny vatan'ny vehivavy, indrindra ny klitoris, ny nipples, ny hatoka ary ny atin'ny feny sy ireo faritra saro-pady hafa, io famporisihana io dia hafindra haingana avy amin'ireo hozatra mankamin'ny ati-doha. afovoany, mba hahatratrarana ny fientanam-po eo amin'ny lahy sy ny vavy, mba hialana sasatra tanteraka ny vatana sy ny saina. Noho izany dia matetika ireo mpitsabo manao firaisana ara-nofo avy any ivelany dia mampiasa atody mitsambikina mba hitsaboana ny vehivavy mijaly amin'ny sery.
Mazava ho azy, ny atody mitsambikina dia azo ampiasaina amin'ny lehilahy ihany koa, saingy ny fanentanana sy fientanam-po an'ny lehilahy dia tsy dia misy dikany loatra sy mahery noho ny an'ny vehivavy. Ho an'ireo vehivavy tokan-tena na vehivavy tsy afaka manana fiainana ara-nofo ara-dalàna dia mpiara-miasa tsara ny mitsambikina atody. Mora ampiasaina izy io, miavaka ny vokany, ary ny vehivavy dia tsy ho ela dia hahazo orgasme. Ny atody mitsambikina tsy tantera-drano aza dia azo ampiasaina ao amin'ny trano fidiovana sy dobo filomanosana. Ny fanaraha-maso lavitra dia mety ho ny fanaraha-maso lavitra azy ireo ary ny hafa fanaraha-maso lavitra. Lalao isan-karazany io, afaka miaina fientanam-po efa ela ianao.
Fampiasana mitsambikina atody:
1, ahintsano ny ampahany amin'ny klitoris rehefa manao filokana, ny fanentanana maharitra ary ny fientanam-po mahery vaika dia mety hahatonga mialoha ny fotoanan'ny orgasme clitoris fa tsy amin'ny tanana fotsiny.
2, Rehefa manao filokana, ny atody mitsambikina dia azo ampidirina koa handrisika ny G-point.
3, Rehefa manao foreplay ny mpivady dia ampiasao izany mba hialana amin'ny fijalian'ny asidra lahy.
4, atody mitsambikina tsy misy tariby dia azo ampiasaina amin'ny mpivady rehefa any ivelany izy ireo.
1, rehefa avy nahazo ilay atody nitsambikina dia mila diovina ary avy eo ampiasaina. Ny fanasana amin'ny rano mafana dia tsara.
2, asio menaka manitra antonony mba hitsambikinana atody sy vava fivaviana.
3, raha maodely amin'ny bateria izy, esory ny bateria aorian'ny fampiasana azy, raha tsy izany dia tsy hampiasaina ny bateria.
4, raha maodely famandrihana izy, alao izy alohan'ny hampiasana mba tsy hisian'ny herinaratra rehefa amin'ny antsasaky ny filokana mihetsika. Maharary kokoa izany.
5, ny zavatra manakiana indrindra dia ny fitandremana ny fanangonana.
Ny atody mitsambikina dia ambaratonga voalohany amin'ny kilalao fanaovana firaisana, raha tsy misy fanentanana sy fahafinaretana ny fiainam-pananahana, ny atody mitsambikina no ho safidinao tsara indrindra.